Resona VISA card olujikelezayo ngetyala | ezifana inzala yikomishoni ukubala, iinkcukacha inkonzo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Resona VISA card olujikelezayo ngetyala | ezifana inzala yikomishoni ukubala, iinkcukacha inkonzo
I-credit olujikelezayo of Resona ikhadi MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA, kukho iinkonzo ezintathu kalukhuni.
ribonucleic 1 kubhabho iliso i "ribonucleic kubhabho", ngoku lixesha lokuba enze evenkileni, yinkonzo apho ungakhetha credit olujikelezayo kuphela ukuba ukhankanye "kwi credit ajikelezayo". intlawulo esisixa-mali okanye intlawulo ngezavenge ngokusetyenziswa isixa semali, ngokuthi ngokukhetha besebenzisa ikhredithi olujikelezayo, kunokwenzeka ukuba zokuthenga siwenze kunye nendlu.
2 elinye iliso evela ukuphumla, kulapho "ribonucleic kamva". Esi sisixa semali okanye izavenge ngexesha yokuthenga, kwanokuba kokuhlaliswa ngokukhankanya intlawulo yebhonasi yinkonzo ukuba kutshintshwa ibe ngetyala ajikelezayo kamva. Ukongeza kule nkqubo efowunini okanye kwi-Internet, unako lula ukutshintsha ukuya credit ajikelezayo.
Noko ke, ukuba ukhankanye i "ibhonasi 2 ixesha intlawulo", njl Ukuba anconywa sele inxalenye, utshintshe kwi ngetyala olujikelezayo endleleni ukuba akunakuba. Ukongezelela, ekubeni kukho kungenzeka ukuba ayinakuguqulwa yaye bayakwazi kuphela yokutshintsha umhla wokugqibela, kuya kufuneka wenze isicelo ekuqaleni.
kunini isibhengezo ribonucleic
3 elinye iliso, yi "nanini Declaration ribonucleic". Oku, nokuba ukuba ukhankanye isixa semali okanye izavenge phezu counter, yinkonzo ukuba kusoloko kuba intlawulo credit esijikelezayo. Le nkonzo yenzelwe ukuba kukhululwa okanye irhoxisiwe nangaliphi na ixesha, ungafuna ukutshintsha amaxesha ngamaxesha ngokungqinelana, ezifana nemeko yekhaya le.
Kwakhona, oko kwandisa intlawulo okanye imbuyiselo ngokupheleleyo, kuba luphawu "nanini Declaration ribonucleic". Ngokomzekelo, xa unika ingeniso engaphezulu, ezifana iibhonasi, ngokuthi intlawulo kukwanda, imbuyiselo ngokupheleleyo, unga nciphisa isixa lokuhlawula yonke imali.
Resona ikhadi MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA olujikelezayo indlela yokubhatala credit cards
Resona MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA, ukuba isicwangciso intlawulo uzilungiselele, ezifana "izifundo ezifutshane", kuba ifomu umsebenzisi ukhethe icebo lokubuyisela Wena. Xa izifundo zexesha elifutshane, iintlawulo zenyanga ibekwe yen 10,000, oko ifakiwe nayo ikhomishini wenzala kulo. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa olujikelezayo ngetyala kunye omtsha, ukuze uhlawule imali kunye nenani iintlawulo zenyanga Kuya, makhe silumke. ikhomishini Izinga
zentengo yemboleko olujikelezayo ngetyala lenzala ikhomishini
Resona MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA ikhadi olujikelezayo kwekhadi Resona MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA i "izinga enkulu zonyaka ka-15,0 ekhulwini." Xa kuthelekiswa iinkampani ezemali abathengi kunye credit card ngokubanzi, iya kunokuthiwa amaxabiso avareji lwamanani.
reference | umdla jikelele olujikelezayo samatyala (ikhomishini), amaqondo enzala
Imali izinga lenzala ubalo Kuye kwabikwa kwi "ngomyinge wenzala we inkcitho x wenzala". Umzekelo, ukuba ityala lokuthenga 100,000 yen credit olujikelezayo kwekhadi Resona MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA, kuya kuba i "100,000 yen × 15% = 115.000 yen '. Ngamanye amazwi, bekuya kuthabatha 15,000 yen kwemirhumo kunyaka omnye kule meko. Ukuba ixesha lokuhlawula ayikho lungaphantsi konyaka omnye, iintlawulo ziya kuba zitshiphu 15,000 yen. uya ungakwazi 000 Imali yen ukuthatha. Ukuba ixesha lokuhlawula ayikho lungaphantsi konyaka omnye, iintlawulo ziya kuba zitshiphu 15,000 yen. uya ungakwazi 000 Imali yen ukuthatha. Ukuba ixesha lokuhlawula ayikho lungaphantsi konyaka omnye, iintlawulo ziya kuba zitshiphu 15,000 yen.